Umpu obanjiweyo weBolt ngeCarcass - Okunye
Umpu obanjiweyo usetyenziselwa ukuyothusa imfuyo ngaphambi kokuba kuxhelwe. Kudliwanondlebe lwethu kunye nomculi okhokelayo weCarcass uJeff Walker, ucacisile ukuba umculo ubhalwe kuqala, kwaye wabhala i-lyric ukuwuzalisa. U-Walker wathi: 'Kum le ngoma ibimfutshane, iqonde ngqo kwinqanaba, ibinefuthe elikhulu, indikhumbuza nje ngompu othinjiweyo osuka kwindawo yokuxhela.'
I-Carcass liqela elinempembelelo laseBritish Metal elakhupha icwecwe labo lokuqala ngo-1988, emva koko laqhekeka emva kweLP ka-1996 Swansong . Utyando yayikukhululwa kwabo okokuqala okoko iqela labunjwa ngokutsha. Kunye nomculi okhokelayo / umdlali we-bass uJeff Walker, u-guitarist wokuqala u-Bill Steer uvela kwi-albhamu kunye nomdanisi omtsha uDan Wilding.
UWalker wathi: 'UBill noDan ngokusisiseko bakhile umkhondo. Ukuba bendinayo indlela yam, ngendiyixube kancinci, kuba yingoma yomgca: ivesi / ikorasi / ivesi / ikorasi / ikhefu. Ingoma elula kakhulu. Ngokwenyani ezithile kwezinye izandi kufana nokudityaniswa kwengoma endala esiyibize ngokuba 'zizixhobo zoRhwebo.' '
wakhe wazi ukuba uyingoma yam yeqhawe
ukuba uya kwisan francisco ingoma
ooh ndingumvukeli ngenxa yokukhaba ngoku
embindini apho livin kumthandazo